I-stanolone powder (521-18-6) hplc =98% | Yenza i-Nandrolone powder
/ iimveliso / Prohormone / Stanolone powder
SKU: 521-18-6. Udidi: Prohormone
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwintlawulo enkulu ye-Stanolone powder (i-521-18-6), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Stanolone powder i-androgen enamandla kakhulu kune-testosterone - ibopha malunga nexesha le-3-5 ngakumbi kwi-androgen receptor. Ukuba uthathe i-5-AR kulezi zicubu kwaye uvimba ukubunjwa kwe-DHT, ngoko uza kubona utshintsho olukhulu kwi-physiology.
Ividiyo yeStanolone powder
Stanolone powder esisiseko Abalinganiswa
igama: Stanolone powder
Ukusetyenziswa kwe-stanolone powder kumjikelezo we-steroids
I-stanolone powder nayo ibhekiselwa ku-androStanolone powder eluhlaza, i-Dihydrotestosterone, i-DHT.
Ukusetyenziswa kweStanolone powder
Isixa: 40mg nsuku zonke.
Isilumkiso kwiStanolone powder
Ukuxhobisa ngokukhawuleza kwamandla kunye nobuhlungu bomzimba we-Stanolone powder ayinani elincinci. I-AndroStanolone i-powder eluhlaza eyayisetyenziselwa ukuba ngumncintiswano wokuncintisana we-steroid njengoko ikuncede ukufumana umsila onzima ngokusebenzisa umgangatho we-fat fat ngokunyusa izinga le-androgen ngaphandle kokunciphisa. Abadlali abaninzi basebenzisa i-AndroStanolone powder ngethuba lokusebenza ngenxa yokutshatyalaliswa kweengcaphephe ezivavanyayo ukususela ekubeni loo nto ihlala emzimbeni nje ixesha elifutshane kunye nexabiso le-testosterone / epitestosterone alinakuchaphazeleka.
I-stanolone powder iyafana ne-dihydrotestosterone yomzimba, njengoko siyazi, iyenziwa ngenguqu ye-testosterone. Ngenxa yoko abanye bathi i-AndroStanolone ipowder eluhlaza i-dihydrotestosterone. I-AndroStanolone powder inefuthe elikhulu kunye ne-androgenic kwaye, ngenxa yesakhiwo sayo, ayikwazi ukuguqulwa ibe yi-estrogen.
Enye into efanelekileyo kukuba i-injection version ayiyiyo inetyhefu. Namhlanje, nangona kunjalo, i-AndroStanolone ipowder eluhlaza ayilisoloko isetyenziswe ngabadlali. Esinye isizathu salokhu kukuba phantse onke amaninzi aseYurophu naseMelika ayengekho ukuthengisa. Esinye isizathu kukuba abaninzi abagijimi basebenzisa i-Masteron esele ifikeleleke ngokufanayo. Akukho yintsusa okanye inkohliso ye-AndroStanolone ipowder eluhlaza iyatholakala kumakethi omnyama.
I-stanolone powder eluhlaza
Ukuthengiswa kweStanolone powder
Indlela yokuthenga i-Stanolone powder esuka kwi-AASraw
I-Stanolone powder idayi Iingcebiso: